Day 3 Morning & Noon Update: Filimka Super 30 maanta oo Axad ah si weyn ayuu u gadmayaa kani waa HIT weyn! | Filimside
Home BOX OFFICE Day 3 Morning & Noon Update: Filimka Super 30 maanta oo Axad...
Day 3 Morning & Noon Update: Filimka Super 30 maanta oo Axad ah si weyn ayuu u gadmayaa kani waa HIT weyn!
Waaw Waaw Superstar-kii soo rogaal celi wuxuuna la yimid fariin waaqici ah oo qof walbo ku qasbeyso inuu tiyaatarka soo aado qofka aan ka hadleyno waa kan ugu xirfada sareeyo Bollywood-ka jiilka qarnigan fanka kusoo biireen cid kale ma ahan HRITHIK ROSHAN oo filimkiisa Super 30 maanta oo Axad wacdaro aad u weyn sameenayo.
Filimka Super 30 labadiisa maalmood ugu horeesay 30 Crore ayuu keenay waana ganacsi heer sare ah kadib markii shalay oo Sabti ahayd sare u kac 50% uu sameeyay balse maanta oo Axad ah waxaa lagu hilmaamay sida uu ku furmay shalay ganacsigii heerka sare ahaa uu sameeyay filimkan.
Aan muhiimada abaarno filimka Super 30 ayaa maanta oo Axad ah subaxdii hore xiliga Hindiya ku furmay 50% waana bilaabasho heer ah oo xaqiijisay in maanta oo Axad ah lagu doodi karo mashruucan 20 Crore ganacsi ahaan ka talaabsan doono.
Filimka Super 30 Jimcadii subaxda hore wuxuu ku furmay 25% ilaa 30% halka Sabti subaxdii hore uu ku furmay 35% ilaa 40% waxayna ka dhigan tahay maanta oo Axad ah halkii ugu sareesay inuu gaaray marba haddii uu 50% ku furmay filimkan fariinta waaqiciga ah xambaarsan.
Filimka Super 30 maanta Axad ah xiliga Duhurka/Galabta Hindiya wuxuu ku furmay ama uu haatan gaaray 70% ilaa 75% waa sare u kac waal ah waayo xalay fiidkii ayuu heerkan gaara markii Sabti ahayd waxay ka dhigan tahay mashruucan caawo fiidkii oo Axad ah hawlaha laga nasanaayo inuu gaari doono 80% ilaa 85% madaama tikit-ka ugu badan maanta la iibsaday.
Fadlan hoos ka eeg filimka Super 30 iyo magaalooyinka waa weyn maanta oo Axad ah sida uu kaga furmay subaxdii hore waxaana la bar bar dhignay xiliga duhurka halka uu maraayo waana hubanti maanta oo Axad ah ganacsi aad u weyn inuu sameyn doono HR filimkiisa.
Delhi subaxdii hore 50%, duhur/galab 85% (864 shaashad)
Mumbai subaxdii hore 55%, duhur/galab 80% (937 shaashad)
Pune subaxdii hore 50%, duhur/galab 85% (340 shaashad)
Bengaluru subaxdii hore 50%, duhur/galab 90% (320 shaashad)
Hyderabad subaxdii hore 60%, duhur/galab 95% (230 shaashad)
Kolkata subaxdii hore 30%, duhur/galab 70% (280 shaashad)
Ahmedabad subaxdii hore 50%, duhur/galab 80% (310 shaashad)
Chennai subaxdii hore 40%, duhur/galab 90% (90 shaashad) waxaa lagu kordhiyay 10 shaashad.
Previous articleJaceylkii Dhexmaray Dharamji & Meena Kumari Iyo Halkuu Ku Dhamaaday!!
Next articleRasmi: Filimada Kabir Singh iyo Article 15 shalay oo Sabti ahayd ganacsiga adag ay sameeyeen